Global Voices teny Malagasy · Aogositra 2009
Tantara misongadina tamin'ny Aogositra 2009
Bahrain21 Aogositra 2009
Amerika Latina21 Aogositra 2009
Afganistana: Androm-pifidianana an-tsary
Afganistana 31 Aogositra 2009
Amin'izao fifidianana faharoa ho an'ny firenena izao, ireo mpitoraka blaogy an-tsary dia nizara sarin'ireo fifidianana mampiseho ny fisian'ny miaramila sy ny fahavitrihan'ny mpifidy.
Iraka: Fahafatesan'i Abdul Aziz Al Hakim lehiben'ireo Shi'ite
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 31 Aogositra 2009
Sayyed Abdul Aziz Al Hakim, lehiben'ny filankevitra ambony Islamika any Iran (ny antoko politika lehibe indrindra ao amin’ny antenimieram-pirenena Irakiana), dia matin’ny homamiadan’ny havokavoka tamin’ny 26 Aogositra tany Tehran, any Iran. Mety hisy fihatraikany amin’ny lafiny politika any Iran ny fahafatesany. Nihetsika tamin’ity vaovao ity ireo mpitoraka blaogy.
Ekoatora: Ny hiaka ho amin'ny fahaleovantena roanjato taona lasa izay
Mediam-bahoaka 30 Aogositra 2009
Mankalaza ny faha-roanjato taonan'ny hiaka ho amin'ny fahaleovantenany amin'ny Espana sy nanampy ireo faritra hanaraka izany ohatra izany i Ekoatora.
Japana: Ny atao amin'ireo “Zavakanton'ny Media”
Ho an’ny firenena mikaroka ny hamadihana ny ‘soft power’ ananany ho toy ny masonkarena [herin'ny rindrankajy ve ity ‘soft power’ ity?], inona no anjara toeran’ny kolontsainan’ny sarimiaina japone sy ny manga ao anatin’ny pôlitikan’ny governemanta? Ny valinteny ofisialy dia hoe ny sarimiaina japone, manga ary zavakanto numérique dia lova sarobidy...
Brezila: Mpianatra nosamborina nohon'ny fanehoan-kevitra tao amin'ny Antenimieran-doholona
Amerika Latina 30 Aogositra 2009
Mpianatra maro no nanao fanehoan-kevitra fanoherana ny Filohan'ny Antenimieran-doholona José Sarney ary dia niaritra famoretana maro samihafa. Ren-tsika miala aina miadana miaraka amin'izany koa ny eritreritr'ireo tontolon'ny fitorahana blaogy momba ny demokrasia Breziliana.
Iràna 26 Aogositra 2009